သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ဆေး - ဝီကီပီးဒီးယား
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ဆေး (အင်္ဂလိပ်: HPV vaccine)သည် လူကိုရောဂါဖြစ်စေသော ပက်ပါလိုမားဗိုင်းရပ်စ်ပိုး (HPV ခေါ် Human papilloma virus)၏ အချို့အမျိုးအစားများကို ကာကွယ်ပေးသော ကာကွယ်ဆေးဖြစ်သည်။ HPV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအမျိုးအစားပေါင်း ၂မျိုး၊ ၄မျိုးနှင့် ၉မျိုးကို ကာကွယ်ပေးသော ကာကွယ်ဆေးများရှိသည်။ HPV ၁၆နှင့် ၁၈ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများသည် ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးရှိသောကြောင့် ကာကွယ်ဆေးအားလုံးသည် ဤနှစ်မျိုးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်လေ့ရှိသည်။ ဤကာကွယ်ဆေးများသည် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရောဂါကို (၇၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့်၊ စအိုကင်ဆာကို (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့်၊ သားအိမ်လမ်းကြောင်းကင်ဆာကို (၆၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့်၊ မိန်းမကိုယ်ကင်ဆာကို (၄၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့်နှင့် အချို့ပါးစပ်ကင်ဆာများကိုပါ ကာကွယ်နိုင်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအမျိုးအစားပေါင်း ၄မျိုးနှင့် ၉မျိုးကို ကာကွယ်ပေးသော ကာကွယ်ဆေးများသည် လိင်အင်္ဂါတွင်ဖြစ်သော ကြွက်နို့(genital warts)ဖြစ်ပွားမှုကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
အကုန်အကျခံနိုင်သောနိုင်ငံများတွင် ဤကာကွယ်ဆေးကို ပုံမှန်ထိုးသင့်သော ကာကွယ်ဆေးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး အခြားကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများနှင့်ပါတွဲ၍ ဆောင်ရွက်ရန် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ အကြံပြုထားသည်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးခံရသောလူ၏ အသက်ပေါ်မူတည်၍ နှစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် သုံးကြိမ်ထိုးရန်လိုအပ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် မိန်းကလေးများအသက် (၉)နှစ်မှ (၁၃)နှစ်အတွင်း ထိုးသင့်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးလျှင် အနည်းဆုံးနောက်(၈)နှစ်အထိ ကာကွယ်မှုပေးနိုင်သည်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသော်လည်း သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရောဂါအတွက် စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများ ပုံမှန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။ လူထုတစ်ရပ်အတွင်းရှိ လူအများစုကို ဤကာကွယ်ဆေးပေးပါက ဆေးမထိုးရသေးသူများပါ အကျိုးရှိနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးသောလူများတွင် ဤကာကွယ်ဆေးမှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိတော့ပါ။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ဆေးသည် အလွန်စိတ်ချရသောဆေးဖြစ်ပြီး (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့်၌ ဆေးထိုးသည့်နေရာတွင် နာကျဉ်ခြင်းဖြစ်တတ်သည်။ ဆေးထိုးသည့်နေရာတွင် နီရဲခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် ကိုယ်ပူခြင်းတို့လည်း ဖြစ်တတ်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကြောင့် ဂီလန်ဘာရေး ရောဂါလက္ခဏာစု(Guillain-Barre syndrome) ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သက်ဆိုင်မှုမတွေ့ရပါ။
ပထမဆုံး သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ဆေးကို (၂၀ဝ၆) ခုနှစ်တွင် စတင်ရရှိခဲ့သည်။ (၂၀၁၄)ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံပေါင်း(၅၈)နိုင်ငံတွင် ဤကာကွယ်ဆေးကို မိန်းကလေးများအတွက် ပုံမှန်ထိုးသင့်သော ကာကွယ်ဆေးအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အခြေခံကျန်းမာရေးစနစ်အတွက် အဓိကလိုအပ်သောဆေးများထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ (၂၀၁၄)ခုနှစ် လက်ကားဈေးမှာ (၄၇)ဒေါ်လာခန့်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ဒေါ်လာ(၂၀ဝ)နှင့်အထက်ပေးရသည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ဤကာကွယ်ဆေးသည် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု မျှတမှုရှိနိုင်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ ၁.၆ "Human papillomavirus vaccines: WHO position paper, October 2014."
↑ Kash, N; Lee, MA; Kollipara, R; Downing, C; Guidry, J; Tyring, SK (3 April 2015).
↑ De Vuyst, H; Clifford, GM; Nascimento, MC; Madeleine, MM; Franceschi, S (1 April 2009).
↑ Takes, RP; Wierzbicka, M; D'Souza, G; Jackowska, J; Silver, CE; Rodrigo, JP; Dikkers, FG; Olsen, KD; Rinaldo, A; Brakenhoff, RH; Ferlito, A (December 2015).
↑ Thaxton, L; Waxman, AG (May 2015).
↑ Saville, AM (30 November 2015).
↑ "Vaccine, Hpv" Archived 17 December 2019 at the Wayback Machine..
↑ Fesenfeld, M; Hutubessy, R; Jit, M (20 August 2013).
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ဆေး&oldid=626987" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၉:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။